Nyika iri kuchinja, saka iwe newe!
Yakatumirwa ne Tranquillus | Oct 14, 2020 | Pamusoro pewebhu
Yakanyorwa na Bertrand Lamour uye yakatumirwa na Nicolas Desfray, Gumiguru 14, 2020
Mune ino mamiriro ehutano, zvinobatsira kuziva mutsauko. Izvi ichokwadi kumakambani, asiwo kune vese vashandi. Dzidza kudzidza, kushingairira mumamiriro ese ezvinhu, kuve nechido uye kuwedzera nzvimbo dzako dzehunyanzvi, kuchinjika kune mamwe madhijitari ekushanda nzira, uine mamwe mamiriro ekushanda anoshanda.
Mazuva ekutanga ematsutso inguva yakakodzera yekutsanangura chirongwa chako nehunyanzvi hwenyanzvi! Ita sarudzo yekuvandudza hunyanzvi hwako uye hwako hunyanzvi kukura. Chinja, kuti uwane izvo zvishoma zvekuwedzera izvo zvinoita mutsauko wako.
KuIFOCOP, isu takachinjawo kuve vatsigiri vari nani mukuvandudza kwavo basa kana kudzidzisa zvirongwa
Isu tinovapa mafomula matsva edzidzo, anowirirana nehurongwa hwavo, zvishuwo zvavo uye zviroto zvavo zveramangwana: Kutarisana-ne-kumeso kudzidziswa mukati mezuva kune avo vanoda misangano chaiyo 100% kudzidziswa kure, uko kunogona kuitiswa manheru nemavhiki evhiki kune avo vatove nemazuva akabatikana.
Nyika iri kuchinja, saka iwe newe! July 10th, 2021Tranquillus
VERENGA Ita tsvagiridzo inoshanda uye yehunyanzvi yemusika
pashure5 zvinhu zvakakosha zvekubudirira mukudzidza mutauro
zvinoteveraExcel 2019 kudzidziswa: izvo zvekutanga
Kushungurudzwa kwetsika, mushandi kusatenda uye nekuisa mamiriro ekukakavadzana
Kudzidziswa kweManeja maneja kana mutambo wepamusoro-soro, Romain yakaramba kusarudza.
Iva Mutengesi Anotengesa
Ndine mvumo here yekutemera mushandi anoshandira mukwikwidzi panguva yezororo rekurwara?